Wasiirka waxbarashada XFS oo Koonfur Africa kula kulmay wasiirada waxbarashada sare iyo tababarada dalkaasi – Radio Daljir
Febraayo 20, 2019 6:45 b 0
Wasiirka waxbarashada Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane C/laahi Goodax Barre ayaa magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Africa waxaa uu kulan iskaashi ah kula qaatay dhigiisa dalka Koonfur Africa wasiirada waxbarashada Sare iyo tababarada Ms Grace Naledi Mandisa Pandor.
Kulanka oo qaatay saacado badan ayaa labada dhinac waxaa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka waxbarasho ee u dhaxeeyay dowlada Soomaaliya iyo Koonfur Africa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga wasaaradaha iyo in la dhameystiro heshiisyada waxbarashada ee labada dowladood.
waxaa sido kale labada dhinac kulankooda ay ku lafa gureen in la is dhaafsado lana kala faa’iideysto iskuulada farsamooyinka gacanta iyo sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta xirfadlayaasha gacanta ku xamaasha iyo sido kale goobaha taciinta wasare iyo ka wada shaqeynta cilmi baarista iyo Tiknaloojiyada casriga ah.
Wasiirad Ms Grace Naledi Mandisa Pandor oo marka uu kulanka soo dhamaaday kadib la hadashay warbaahinta ayaa xustay in Soomaaliya ay tahay dal dib u soo dhisamaya dhinacyada waxbarashada.
“Soomaaliya hada waxaa ay ku jirtaa hanaankii dib u dhiska dalka iyo dimoqraadiyada,iyo hey’adaha kale ee dadweynaha,Soomaaliyana waa ay na saaciday xilligii adkaa ee gumeystaha dalkeena ee dhibaatada aan ku jirnay ,anaga waa in aan kaalinteena kasoo dhalaalnaa wada shaqeynta iyo caawinta walaalaheena Soomaaliya “
Wasiirka waxbarashada xukuumada Soomaaliya Mudane C/laahi Goodax barre oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in wasiirada waxbarashada sare iyo tababarada dowlada Koonfur Afrika ay isla garteen in la iska kaashado waxbarashada sare iyo cilmi baarista dhawaan ay dalka tagi doonaan khubaro ka socda wasaarada waxbarashada Iyo tababarada sare si ay u qaabeeyaan dhameystirka heshiisyada iyo fulinta waxa ay isla garteen labada wasaaradood.
Kooxda daacish oo digniin culus loo diray